त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अर्का कोरोना संक्रमित भेटिए - Lokpath Lokpath
२०७७, ९ जेष्ठ शुक्रबार २३:५४
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अर्का कोरोना संक्रमित भेटिए
प्रकाशित मिति : २०७७, ९ जेष्ठ शुक्रबार २३:५४
काठमाडौं । राजधानीको महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको परिसरको मनमोहन कार्डियो एन्ड भास्कुलर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
उनीमा शुक्रबार कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार मकवानपुरकी ५४ वर्षीया महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताएको थियो । तिनै महिला टिचिङस्थित मनमोहन कार्डियो एन्ड भास्कुलर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत रहेको पाइएको हो ।
सेन्टरका कोभिड–१९ म्यानेजमेन्ट टिमका संयोजक रञ्जन सापकोटाले मुटुको समस्या रहेकी महिलालाई गत आइतबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनमा कोराना टेस्ट गर्दा पोजेटिभ पाइएको हो । अहिले बिरामीलाई आइसियूमा सार्ने तयारी भएको छ ।
यसअघि टिचिङमा एक बालकमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । भने त्रिविमै डेलिभरी गराएकी सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीमा पनि कोरोना पुष्टि हुनुका साथै मृत्यु भएको थियो ।
शिक्षण अस्पताल जान लागेका डा. केसीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायो
काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै जुम्लामा अनसन बसेका डा गोविन्द केसीलाई
१०४ किलो गाँजा सहित तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । मनहरि गाउँपालिका–६ स्थित लोथर खोलाको बगरको बाटो प्लाष्टिकको बोरा बोकी हिँडिरहेका
परोपकारी संस्थाले समाजमा निःस्वार्थ रुपमा सेवा गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परोपकारी संस्थाले समाजमा निःस्वार्थ रुपमा सेवा गर्नुपर्ने
कोही नहुनेको ‘कान्ति र ट्रमा’ छ !
काठमाडौं – कान्ति बाल अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले गरिब तथा विपन्नको प्रारम्भिक